Ukwenyuka okanye ukunganyani? Yintoni engcono ukubonisa iphrojekthi? - Geofumadas
NgoDisemba, 2018 ezintsha, Internet kunye neBlogs
Indlela yokubonisa iiprojekthi iye yafumana inguqu ebalulekileyo, ngenxa yendlela yokwenza umgangatho woshishino kunye nokusetyenziswa kobuchwepheshe obutsha. Kwaye kwaba ngumbuzo wexesha lokuba le nkqubela ifikeleleke kwicandelo lezakhiwo. Zona zombini izinto eziyinyaniweyo kunye neyona nyaniso inika ithuba ukubonelela ngeeprojekthi ngendlela entsha kunye neyobuhlungu, ukunikela ngexabiso elikhulu ekuqondeni kwakho.
Iikhampani ezinkulu kunye nezakhiwo ezincinci zezakhiwo kunye nezobunjineli emhlabeni jikelele zisebenzisa ezobuchwepheshe kwiinkqubo zabo zemihla ngemihla, kwizigaba ezahlukeneyo zeprojekthi. Kodwa ngaphambi kokuthatha isigqibo sokubazisa ukuba kubalulekile ukuba baqonde ukungafani kwabo ukuba bazi into efunekayo, into eya kuxhomekeka kwiprojekthi ekubhekiselele kuyo.
Ukunyaniseka okwenyukayo kunye nenyaniso ebonakalayo: ukungafani
Ngayo Ukunyaniseka okwenyusiweyo kukugqithiseleyo ulwazi olongezelelweyo malunga nezinto zangempela kunye neendawo. Ngale ndlela, kunokwenzeka, umzekelo, ukubonisa imodeli ye-3D yeprojekthi kwindawo yangempela apho iya kubakho khona, kwaye ukuyijonga ngokubanzi. Ukunyaniseka okwenyukayo kukuvumela ukubonisa inkqubela phambili yeprojekthi, ukugqamisa nokugqwesa izigaba ezahlukeneyo.
Ngakolunye uhlangothi, Ubungqina bezinto ezintle ziquka ukusebenzisa izixhobo ezifihla imbono, okwenza kubone kuphela i-100% yendalo. Akukho nto ibonakalayo yinyani, ivelisa i-virtual world in 3D okanye kwiifayile ze-360 okanye iividiyo. Oku kuvumela, umzekelo, ukuba uqale ukusuka kwindawo apho iphrojekthi ihamba ngayo, ukubeka imodeli ye-3D esiyifake kuyo.
Bobabini imizekelo yenyaniso engakumbi Ngokwenyani, umsebenzisi unethuba lokusebenzisana nehlabathi, efumana ulwazi olubalulekileyo malunga neprojekthi.
Indlela yokubandakanya ukunyaniseka okwenziweyo okungakumbi kunye nokunyaniseka kweprojekthi
Sifumene kwi Imiphumo engumngcipheko engonakaliyo Intle kakhulu yesicelo sayo kwiiprojekthi, njengokuba kunjalo kwimeko yokwenyani. Yaye inyaniso kukuba, ngokuchasene noko kubonakala ngathi, kuyinkqubo elula kakhulu kwaye ekhawulezayo.
Ngokuchanekileyo Into eyinkimbinkimbi kakhulu kukufikelela kwinto esele sinayo, leyo iprojekthi yethu ibalwa kwaye ifakwe kwi-3D. Ukuqala ukususela kwisiseko esiya kuthi siza kukhetha ukubonakalisa kwinyani engaphezulu kwinqwelo okanye ukubeka imodeli ye-3D kwindawo yangempela yesakhiwo, okanye ukuthabatha inyaniso kwi-studio okanye kwiindawo zokuthengisa. Ukhetho luya kuxhomekeka kubukhulu beprojekthi kunye notyalo-mali oluya kwenziwa.
Ukuba ukhetha isigqibo sokwenza ubungqina benyaniso, ungasebenzisa isiteji yobunjineli, ukupapasha iphrojekthi kwisiteshi somntu siqu. Unokuphinda uhlakulele isicelo esisisigxina seprojekthi. Kodwa ukuba ukhetha uqobo lwenyaniso, kufuneka uhlakulele inkampani ekhethekileyo kuphela ekuphuhlisweni kweqiniso.
Post edlulileyo«Edlulileyo Yiya eVenezuela ukuya eColombia -I-odyssey yam
Omnye uphendule "Ukunyaniseka okanye ukunganyani? Yintoni engcono ukubonisa iphrojekthi? "U
ULudwig Stroebel uthi:
Iqala ngombuzo kwaye ayifiki mpendulo okanye sisisombululo, inqaku alicacisa gca ukuthandabuza okukuphakamisayo, kungathi kanti ubuza ngaba ngu-1 okanye ngu-2? Kwaye inqaku liza kuphendula "ukuba zombini amanani"